Ancelotti oo shaaca ka qaaday sababta uu ugu kasloon yahay Real Madrid kahor finalka Champions League – Gool FM
(Paris) 28 Maajo 2022. Tababaraha Real Madrid ee Carlo Ancelotti, Thibaut Courtois iyo Marcelo ayaa goobjoog ka ahaa shirkii jaraa’id ee ka horeeyay finalka Champions League ee caawa oo Sabti ah la ciyaari doono.
Kooxaha Liverpool iyo Real Madrid ayaa caawa oo Sabti ah taariikhdana ku beegantahay 28-ka May isku wajihi doona finalka tartanka ugu xiisaha badan heer kooxeed ee UEFA Champions League.
Real Madrid ayaa gaartay finalka Champions League kaddib markii ay ka soo gudubtay kooxo dhowr ah ee awood badan, sida Chelsea, Paris Saint-Germain iyo Manchester City, Karim Benzema ayaana ahaa sababihii ugu muhiimsanaa oo ay kaga soo gudbeen caqabadahaas aadka u adag.
Tababaraha Real Madrid ee Carlo Ancelotti oo ka soo muuqday shir jaraa’id ayaa kahor ciyaarta caawa, ayaa wuxuu ka hadlay Karim Benzema, wuxuuna yiri:
“Waxaa wanaagsanaatay marka loo eego waayaheygii ugu horeysay Real Madrid ee la shaqeynta Benzema, wuxuu leeyahay shakhsiyad weyn oo garoonka dhexdiisa iyo dibadiisa ah, laakiin waxa aan waxba iska bedelin waa tayadiisa farsamo, oo uu ilaa hadda ku haysto meesha ugu sareysa, oo ay u dheer tahay khushuucnaantiisa.”
“Waan u qalanay sababtoo ah tayada farsamada iyo tayada ciyaartoyda. Kooxdu waa ay ka go’an tahay, laakiin tayo ayay leedahay, waxaana aad ku guulaysan kartaa oo kaliya haddii aad tayo iyo tignoolajiyada leedahay.. Sidoo kale, taariikhda kooxdan ayaa hore noo riixday.”
“Haddii aan u qalano inaan badino, waa inaan ku hor cadeynaa kulanka Liverpool, runtii sanadkan aad ayaan ugu riyaaqayaa kooxdaan iyo ciyaartoydaan, waxaan dareemayaa daganaan, waxaana ogahay inay jiri doonto walaac yar, laakiin walwalka aan qabo waxaa la dagaallama rabitaanka ciyaartoyda waxayna i siineysaa kalsooni.”